Sidee baan u samayn karaa SEO ee qaybaha blog?
Milkiilayaasha Website waxay abuuraan blog post si ay u hagaajiyaan darajooyinkooda bogga waxayna soo jiidaan gaadiidka badan ee goobtooda. Haddii aad sameysatid blog, waxaad jeclaan lahayd inaad macaamiishaada u suurtagaliso inay u helaan oo ay yimaadaan goobtaada. Waxaa intaa dheer, waxaad sidoo kale dooneysaa in martidaada internetka ay awoodaan inay ilaaliyaan qoraallada dhawaan la daabacay ee bloggaaga. Waxaa jira fursad aad u wanaagsan oo aad ugu badaleyso booqdayaashaada cusub ee akhristayaasha caadiga ah ee bloggaaga - taruhan sepak bola online indonesia. Waxyaabaha aad ku abuurtay sabirka iyo daryeelka waa in aan lagu qarsoonayn boggaaga ka dib markaad hal ka akhrido dhagaystayaashaada. Waxyaabaha dhawaan la daabacay ayaa sidoo kale u adeegsan kara macaamiishaada iyo akhristayaashaada. Taasina waa sababta ay had iyo jeer u noolaato oo ay u aragto qof walba. Si aad sidaas u samayso, waxaad u baahan tahay inaad u qeybiso qaybtaada blog si aad u qaybiso qaybaha la fududeeyay. Waxay ka caawin doontaa labadaba akhristayaashaada iyo baaritaanada raadinta suurtagal ah in ay baaraan dhamaan boggagaaga iyo inaad sare u qaaddid boggaaga Google. Maqaalkan, waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah macluumaadka qiimaha leh sida laysugu geeyo boggaaga si aad saamayn ugu yeelatid qiimeynta Google.
Marka aadan haysan wax koox
Waxaa jira dad badan oo bloggers ah kuwaas oo si joogto ah u abuuraya nuxur cusub, gelinaya qotoda goobta hore. Dhinaca kale, waa sax, sababtoo ah waxay si joogto ah ugu soo darayaan macluumaad gaar ah oo qiimo leh oo ku yaal boggooda. Dhinac kale, ma siinaysid fursad aad akhristayaasha blog-ka cusub si ay u qabtaan qaar ka mid ah xaqiiqooyinka muhiimka ah ee ka soo baxa waxyaabaha dhawaan la daabacay. Meelahaagu waxay u muuqdaan in loo qoro oo keliya in la akhriyo hal mar. Haddii aadan haysanin cinwaano iyo isku xiro hal maqaal oo kale, waxaad baabi'inaysaa gaadiidkaaga. Waxaa intaa dheer, waxaad ka sii xumaanaysaa isticmaalayaasha waayo-aragnimo u leh blog, iyaga oo ka dhigaya iyaga oo maraya kaydka. Waxay u muujinaysaa dadka isticmaala in waxyaabahaagii hore ayan qiimo lahayn in ay wax akhriyaan iyo raadinta qoryaha oo aysan macquul ahayn in la kala saaro.
Hagaajinta isticmaalkaaga blogka adigoo abuuraya qaybo content
Si loo wanaajiyo boggaaga raadinta boodhadhka, hubi in booqdayaashaadu si sahlan ugu socdaan qaybahaaga bogagga iyo boggaga waxayna ka heli karaan waxa ay u baahan yihiin hal daqiiqo. Akhristahaaga cusub ee akhristayaasha waa in ay haystaan ​​liis ay ku qoran yihiin boggagaaga iyo fikradaha wixii kale ee ay ka akhrisan karaan mawduuc gaar ah. Waxaa intaa dheer, hannar amar ah oo ka mid ah boggagaaga blog, wuxuu siin doonaa fursad aad akhristayaashaaga caadiga ah si aad u akhrido nuxurka gabowga iyo tusaale ahaan la barbardhig mid cusub.
Sidee qaybaha blogku kuugu kordhinayaan boogaaga SEO
Booga si fiican u qaabaysan ayaa sidoo kale faa'iido u leh hindisada raadinta raadinta. Xaaladaha badankood, bloggers waxay wax ka qabtaan mowduucyo isku mid ah oo ku yaalla posts. Marka sidaas la samaynayo, waxay ku beegsanayaan isla shuruudaha raadinta. Si kale haddii loo dhigo, blogger ayaa laga yaabaa inuu la tartamo contentkiisa gaarka ah ee boosaska sare ee Google. Ma keeneyso wax qiimo ah oo blog ah oo ka yimaada dhinaca raadinta mashiinka raadinta. Haddii aad sameysid bogag qaybta ah oo isku xir dhammaan qodobadaada mawduucyada la xidhiidha isla qaybtaas, waxay u oggolaan doontaa in qaybta blogka ah ay ka helaan taraafikada taraafiga ah ee ka yimaada mashiinnada raadinta.